You Ga-atụfu Ọrụ Ahịa Gị na Robot? | Martech Zone
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị ị na-eji snicker na… wee gaa gbaa bourbon ka ịchefu. Na akpa anya, nke a yiri ka ọ bụ ajụjụ nzuzu. Kedu otu n'ime ụwa ị nwere ike isi dochie onye njikwa ahịa? Nke ahụ ga-achọ ikike iji mụọ omume ndị na-azụ ahịa nke ọma, nyochaa data dị mgbagwoju anya na ọnọdụ dị mma, ma chee echiche iji wepụta ihe ga-arụ ọrụ.
Ajụjụ achọrọ ka anyị tụlee ọrụ ndị anyị na-arụ n'ezie dị ka ndị na-ere ahịa kwa ụbọchị na ihe ndị ahịa kwesịrị ịdị na-eme kwa ụbọchị. Imirikiti ndị na-ere ahịa na-ebugharị data site na sistemụ gaa na sistemụ, na-emepe ma na-enyocha akụkọ iji nye ihe akaebe na nnwale ha ziri ezi, enweghị isi, ma ọ bụ enwere ike ịkachasị mma, wee jirizie okike ha mee ka nsonaazụ azụmaahịa pụta.
Kwọ nsonaazụ azụmaahịa na imepụta ihe dị ka ntọala nke ahịa ọ bụla, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị enweta oge zuru ezu iji mee nke ahụ. Usoro ihe ochie abaghịzi, sistemụ anaghị ekwurita, ahịa na-agbanwe, anyị na-achọ usoro agile ọbụlagodi iji debe. N'ihi ya, anyị emefuola ọtụtụ n'ime mgbalị anyị karịa ka anyị bara n'ezie - creativity. Ihe okike nwere ike ịbụ ihe mgbochi kachasị sie ike iji robot dochie ya. Nke ahụ kwuru… ọrụ ndị anyị na-etinye oge anyị niile na ya nwere ike ịgbanwe karịa ka ị chere.
Ọganihu na nkà na ụzụ bụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị na-ere ahịa n'ihi na ha ga-ewepụ ọrụ ndị na-adịghị adị, ugboro ugboro, na nyocha ma mee ka anyị lekwasị anya karịa mgbalị anyị ebe talent anyị dị n'ezie - creativity.
Ngwaọrụ igwe - site na iji ọtụtụ ihe agbakwunye data na-azụ data ahịa, data asọmpi, na data ndị ahịa, nkwa nke mmụta igwe bụ na sistemụ nwere ike ịkọwa, mezuo, na ọbụlagodi nyocha dị iche iche. Chee echiche oge ole ị ga - alaghachi mgbe ịnweghị ịhịa aka na ịjụ ajụjụ ugboro ugboro.
Amamịghe echiche - ezie na iche iche nwere ike ịbụ iri afọ ole na ole, ọgụgụ isi bụ ọganihu na-akpali akpali na mpaghara ahịa. AI ka na-achọ data na-enweghị ngwụcha iji ruo ọkwa okike nke mmadụ taa, yabụ enwere obi abụọ na a ga-edochi onye njikwa n'oge ọ bụla.
Nke a apụtaghị na AI agaghị emeghachi ihe ọ bụla, n'agbanyeghị. Cheedị usoro na-enyocha pịa-site na data na mgbasa ozi - wee nyochaa mgbasa ozi asọmpi. Ikekwe AI nwere ike ịmụta otu esi emepụta ọdịiche ezi uche dị na ya na isi okwu na ihe ngosi iji bulie ntinye na ntụgharị. Anyị anọghị ọtụtụ afọ na nke ahụ - usoro ndị a dị.
A na-e mimomi ihe okike mmadụ n'ụzọ dị mfe, mana ọ ga-esiri ya ike ịmeghachi ya. Enweghị m obi ike dị ukwuu na m ga-ahụ robot ka ọ na-etolite dị ka mkpọsa okike dịka Leisurejobs mere na infographic a n'oge na-adịghị anya. Ma ekwenyesiri m ike na afọ ole na ole na ọ ga-enwe ike ịmụta ihe na ya ma copyomie ya!
A ga - eji rọbọt dochie 47% nke ndị ọrụ mmadụ site na 2035, kedu ihe ga-ekwe omume na a ga - anọchi gị?
Ọrụ Gị Hà Ga-akwụsị?
Tags: 2035aiAmamịghe echicheụghaurejobsngwa igweịrị elu nke robotsahịa robotnnọchi robot
Nchọgharị olu na Cusp nke formgbanwe Azụmaahịa?
Etu esi mejuputa ahia ahia (ABM)